Vaovao - Fitaovana fanazaran-tena
Ny fitaovana fanazaran-tena dia fitaovana fanarenana hanatsarana ny fahafahan'ny havokavoka ary hampiroborobo ny fanarenana ny taovam-pisefoana sy ny lalan-drà.
Ny rafitra dia tena tsotra, ary ny fomba fampiasana dia tena tsotra.Andao hiara-hianatra ny fomba fampiasana ny fitaovana fanazaran-tena.
Ny fitaovana fanazaran-tena amin'ny ankapobeny dia ahitana hose sy akora fitaovana.Ny hose dia azo apetraka amin'ny fotoana rehetra ampiasaina.Ho fiomanana amin'ny fampiofanana, raiso ny fantson-drano ary ampifandraiso amin'ny mpampitohy eo ivelan'ny fitaovana, dia ampifandraiso amin'ny vavan'ny vava ny tendrony ilany.
Aorian'ny fifandraisana dia ho hitantsika fa misy famantarana ny zana-tsipìka eo amin'ny akoran'ny fitaovana, ary azo apetraka mitsangana sy stably ilay fitaovana, izay azo apetraka eo amin'ny latabatra na tazonina amin'ny tanana, ary ny manaikitra amin'ny faran'ny sodina dia azo atao. tazonina amin’ny vava.
Rehefa miaina araka ny tokony ho izy, amin'ny alàlan'ny fahataperan'ny lalin'ny kaikitra, dia ho hitantsika fa miakatra tsikelikely ny mitsingevana eo amin'ilay fitaovana, ary miantehitra amin'ny entona mivoaka araka izay azo atao mba hihazonana ny fiakaran'ny mitsingevana.
Aorian'ny fivoahana, avelao ny vava manaikitra, ary manomboka mifoka rivotra.Aorian'ny fitazonana ny fifandanjana amin'ny fofonaina dia atombohy indray araka ny dingana amin'ny ampahany fahatelo, ary avereno tsy tapaka ny fiofanana.Ny fotoana fanofanana dia azo ampitomboina tsikelikely avy amin'ny fohy mankany amin'ny lava.
Amin'ny fampiharana dia tokony handinika tsikelikely isika ary hanatanteraka tsikelikely araka ny fahaizantsika manokana.Alohan'ny hampiasana azy dia tokony hanaraka ny toromariky ny manam-pahaizana isika.
Ny fanazaran-tena maharitra ihany no ahitana ny vokany.Amin'ny fanazaran-tena tsy tapaka dia afaka manatsara ny fiasan'ny havokavoka isika ary manamafy ny fiasan'ny hozatry ny taovam-pisefoana.